कतै तपाईको गालामा त डिम्पल छैन? हुने र नहुने दुवैले जन्नुहोस् डिम्पलबारे यी रहस्य ! – ramechhapkhabar.com
कतै तपाईको गालामा त डिम्पल छैन? हुने र नहुने दुवैले जन्नुहोस् डिम्पलबारे यी रहस्य !
के तपाइँलाई गालामा डिम्पल भएको मनपर्छ ? के तपाइँ पनि डिम्पलको कारणले गर्दा अनुहार राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरा सोच्नुहुन्छ ? धेरैजसो मानिसहरुलाई गालामा खोपिल्टो भएको मनपर्छ । ८०% मानिसहरुको अनुहारमा डिम्पल हुदैंन भने २०% मानिसहरुको अनुहारमा मात्र डिम्पल हुने गर्दछ । धेरैजसो मानिसलाई डिम्पलको रहस्यबारे जानकारी छैन । र डिम्पल भएका मानिसहरुलाई समेत पनि यसको अर्थबारे थाहा नहुन सक्छ । :
वास्तवमा डिम्पल अनुहारको मांसपेशीको कुरुपता हो : डिम्पल भएको मानिसहरुलाई देखिर अन्य मानिसले इर्स्या गर्ने पनि धेरै हुन्छन् । मानिसहरु डिम्पलको लागि धेरै पैसा खर्च गरी सर्र्जरी गर्न पनि तयार हुने गर्दछन् । तर यो वास्तवमा अनुहारको मांसपेशीको बिकृती हो ।
समझदार आफ्ना श्रीमान् समझदार होस् भन्ने चाहन्छिन्, महिलाहरु । आफुलाई बुझ्ने, सहयोगी, कुनैपनि कुरालाई सही ढंगले मूल्यांकन गर्ने पु’रुषलाई श्रीमान्को रुपमा अं’गाल्न चाहन्छन् ।